Apple inotangisa iOS 11 Beta 10 yevagadziri, inogona kunge iri GM | IPhone nhau
Apple Inoburitsa iOS 11 Beta 10 YeVagadziri, Inogona Kuva GM
Zvinotaridza kuti Apple haina kuronga kuzorora kunyangwe svondo rapfuura kuvhurwa kweIOS 11, uye ndezvekuti kubva paruoko rweiyo inotarisirwa kwazvo iPhone 8 isu tichava nemasikirwo nenzira yesoftware. Kuti, Kubva 19: 00 nhasi, iyo nguva ye fetish yekambani yeCupertino, tiri kunakidzwa neyegumi vhezheni yeIOS 11 Beta.
Muchidimbu, iyo nyowani vhezheni yeyakagadzikana kwazvo nharembozha yekushandisa pamusika iri pano uye zvinopfuura izvo isu tichazviwana isu takatarisana nezvavanowanzo daidza Goridhe Master, iyo yakajeka asi yapfuura vhezheni yeanoshanda system.
Ehezve, vadzidzi vevadzidzi vanga vaine basa rakawanda gore rino, pachokwadi isu hatina kurangarira tichiona maBetas mazhinji mumakore, vakashanda nesimba kwazvo kuchenesa uye kugadzirisa chirongwa chekushandisa icho chiri kutisiya tiine manzwiro makuru kubva pakutanga kwayo kuvhura, zvisinei nekuti Mune mairi maviri ekupedzisira shanduro takawana zvimwe zvakadzama zvakakanganisa kushandiswa kwebhatiri mune zvinoshandiswa seYouTube neWhatsApp. Zvirokwazvo, Kune gumi maBetas atakatoyedza, uye chokwadi ndechekuti hatina kukwanisa kuwana nhau chaidzo kwemavhiki mashoma kupfuura zvekare gadziriso.
Muenzaniso wakajeka ndewekuti yeiyo iPhone 6s isu takawana isingasvike makumi mana MB yekuburitswa yeiyi Beta 10 uye yakaiswa zvinoshamisa nekukurumidza. Tichiri kuongorora mashandiro ehurongwa nechinangwa chekutsvaga zvakaringana, panguva iyoyo isu tichagadzirisa posvo kuitira kuti tikuchengetedze iwe sezvazvinoitika kusvika paminiti. Asi senguva dzose, tinokuyeuchidza izvozvo manheru ano kutenderedza 23:50 une musangano paYouTube neiyo chiteshi All Apple yePodcast mumwaka uno unonakidza, apo pachave nemubatanidzwa wezhizha uye isu tichadziisa injini dzedu pakuratidzira kwakakosha svondo rinouya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Apple Inoburitsa iOS 11 Beta 10 YeVagadziri, Inogona Kuva GM
Veruzhinji 9 vatovepo futi !! Kwaziso
Kudhanilodha, maita basa.
Naiyo nhamba yekuvaka haisi iyo Goridhe Master. Aya maGM betas anowanzove neakavakwa iyo inofanirwa kunge yakaita iyi 15AXXX uye kwete senge yabuda nhasi iyo ine akawanda manhamba 15A5372a.
VLC inogadziridzwa ichivandudza zvimwe zvemashandisirwo
Apple's Zviitiko zveApple TV zvinowedzeredzwa mukugadzirira rinotevera rinotevera